musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Musangano Weindasitiri Nhau » OTDYKH Expo muRussia Kubudirira Kwekusimudzira
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hospitality Industry • Musangano Weindasitiri Nhau • misangano • nhau • Russia Kuputsa Nhau • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo
OTDYKH Leisure Fair muRussia
Iyo 27th edition yeOTDYKH Leisure Fair muRussia yasvika kumagumo, uye kwaive kubudirira kukuru. Yakatanga kubva munaSeptember 7 kusvika 9 muExpocentre Fairgrounds muMoscow. Gore rino makambani anoshamisa mazana mana nemakumi mana akatora chikamu, kubva kumatunhu makumi mana nematanhatu eRussia nenyika makumi maviri nenomwe dzakasiyana.
Iyo OTDYKH Leisure Fair inoratidzira yaive nemakambani mazana mana kubva kumatunhu makumi mana nematanhatu eRussia nenyika makumi maviri nenomwe dzakasiyana.
Vanopfuura zviuru zvitanhatu vevashanyi vekutengesa vakapinda mumunhu munzvimbo dzekunze, uye vanhu vanopfuura zviuru zvitatu vakapinda pamhepo.
Chiratidziro chakaratidza zviitiko zvebhizimusi makumi matatu nevatauri vanopfuura zana nemakumi mashanu nevatori vechikamu.
Nyika dzakatora chikamu mu2021 OTDYKH expo yaive: Azerbaijan, Belarus, Brazil, Bulgaria, China, Cuba, Cyprus, Egypt, Germany, India, Iran, Italy, Japan, Jordan, Lithuania, Moldova, Peru, Spain, Sri Lanka, Thailand, Tunisia, uye Venezuela.
Gore rino i OTDYKH Kuvaraidza Kwakanaka vakapemberera vatsva vakawanda pachiitiko ichi, kusanganisira nyika yeAzerbaijan, dunhu reCeará muBrazil, dunhu reTottori muJapan nekambani, Sri Lankan Airlines.
Pakati pematunhu makumi mana nematanhatu eRussia anodada akamiririrwa kuexpo, kwaivewo nevatsva vanofungidzirwa. Aya aive matunhu eYugra, Krasnoyarsk Territory, Tomsk, Chelyabinsk, matunhu eRostov neOmsk neRepublic of Udmurtia.
Kuuya kuexpo kwakasvika vanhu vangangosvika zviuru gumi vari vaviri pachinzvimbo uye neanenge. Vanopfuura zviuru zvitanhatu vevashanyi vekutengeserana vakauya ivo pachavo kuexpo nepo vanhu vanopfuura zviuru zvitatu vaitevera chiratidziro kuburikidza nemapuratifomu epamhepo. Nekurerutsa idzi dzimwe nzira dzepamhepo, expo yakakwanisa kuwedzera kuratidzira kune vese vatori vechikamu kubva pasirese.
Zvekare zvakare, iyo OTDYKH Leisure Fair yakaratidza huwandu hunoshamisa hwevamwe, vese vekumba nevekunze. Expo yaidada nekuzvirumbidza kuEgypt senyika yavanobatirana nayo gore rino ine chimiro chinoshamisa uye nhumwa huru. Dunhu rekudyidzana raive Nizhny Novgorod uye iro guta rekudyidzana raive St. Petersburg. Ivo vepamutemo vadyidzani vechiitiko vaive dunhu reAltai neRepublic yeKhakassia. Iyo yepamutemo yekushanya opareta shamwari yaive Academservice. Chekupedzisira, mukuru wepamoyo aive Sberbank, bhangi hombe muRussia uye rimwe remasangano anotungamira emari pasirese.
Kunyangwe paine zviripo parizvino zvirevo zvepasirese zvekufamba uye miganhu yakavharwa, varatidziri vekunze vakatora chikamu kubva pasirese pasirese. Mukudzoka kunoshamisa kune zvakanaka, kwete chete kuti Egypt yaive nyika yekudyidzana pachiratidziro, asi yakatumira nhume huru kuexpo, inotungamirwa nevanoremekedzwa, Gurukota rezveKushanya neAntiquities dzeEjipitori, Va Khaled al-Anany. Iyo yakakwira nhanho yekufarira kwehunyanzvi muchiitiko chegore rino chaive nekuda kwekutangazve kwendege dzakananga pakati peHurghada neShararm el-Sheikh nemaguta makumi mana nematanhatu muRussia.
Kutaurwa kwakakosha kunoenda kuSri Lanka Tourism Promotion Bureau iyo yakaratidza yakasarudzika, hombe simendi nemakambani gumi nematatu ekuratidzira. Sri Lanka yakaratidza boka guru revatungamiriri iro raitungamirwa neBazi rezveKushanya & Aviation, Hon. Ranatunga Prasanna. Pamusoro peizvi, Sri Lankan Airlines vakapinda kekutanga munhoroondo yenhoroondo, neyavo bespoke stand.
Latin America yaimiririrwa zvakanaka pa2021 OTDYKH Leisure yakanaka; Cuba yakaratidza shanduko kudzoka kune pre-denda fomati yekuratidzira ine yayo chaiyo 100m² stand. Pamhemberero yekuvhura, Cuban wekutanga Mutevedzeri wegurukota rezveKushanya, Maria del Carmen Orellana Alvarado akataura kuti Cuba iri kushanda zvakaoma zvakaoma kuti ive nzvimbo yakachengetedzeka yeECVID kune vafambi uye iri kugadzirira kuvhurazve miganhu yayo. Nekuda kweizvozvo, kubva munaNovember 15, 2021, zvichienda mberi, Cuba ichadzima bvunzo dzeCVVID dzePCR dzevashanyi, uye panzvimbo pezvo kuongororwa kusingaenzaniswi kunoitwa kana wasvika.
Kunyangwe hazvo nyika zhinji dzekumadokero kweEurope dzichine miganhu yakavharwa uye zvirambidzo zvekufamba, paive nehutano hwakanaka kubva kuEurope. Bulgaria, Spain, neCyprus vese vaive nemastands avo, nepo vamwe varatidziri vaisanganisira Italy, Germany, neLithuania.
Vatsva vanotaurwa veAzerbaijan vakaita chinetso pamwe neyakaomarara kumira kwavo uye 18 makambani anotora chikamu. Ivo vakaitawo zviitiko zvakasiyana uye vakaita mumisangano yakafanorongwa yeB2b nevatungamiriri veRussia vafambi uye vezvenhau. Izvi zvakatungamira mukumisikidza nhaurirano yakabudirira yakavhurika pakati peRussia neAzerbaijan.
Paive nezvakawanda zvakaonekwa zve2021 OTDKYH Leisure Fair, kusanganisira zvibvumirano zvakawanda zvepamutemo zvakasaina. Iyo inowirirana guta St. Petersburg yakasaina zvibvumirano zvitatu, chimwe chayo chaive chibvumirano pakati peSt.
Imwe nguva yakakosha pakuratidzira yaive kusainwa kwechibvumirano chepakati chekugadzira mugwagwa mukuru weRussia, iyo M-12. Matunhu mashanu anoorora eRussia akasaina chibvumirano: Moscow, Republic of Tatarstan, Vladimir dunhu, Nizhny Novgorod dunhu, uye Chuvash Republic.
Chekupedzisira asi kwete nenzira diki, Bhizinesi rakakurumbira chirongwa zvakare raive budiriro inoshamisa, ichizvirova zviitiko makumi matatu zvakapindwa nevatauri zana nemakumi mashanu nemazana mashanu. Zvakanyanya kuratidzwa muchirongwa chebhizinesi chaive chikamu chehurongwa hwakanzi, Iyo Ramangwana reKushanya, Mafambiro Ekufamba. Ichi chiitiko chakaratidza kuve hurukuro ine hupenyu pakati peMinister mazhinji ekune dzimwe nyika ezvekushanya pamwe nevamiriri kubva kuRostourism neUNWTO.
Mukupedzisa, zvakare zvakare chinyorwa chazvino cheOTDYKH Leisure Fair chaive chinoshamisa kubudirira nemakambani mazana mana nemakumi mana anotora chikamu kubva kumatunhu makumi mana nematanhatu eRussia nenyika 450 dzakasiyana. Mutambo wacho waive nevanhu vangangoita zviuru gumi, vese mumunhu uye online.
OTDYKH Expo komiti inoendesa kutenda kwayo kune wese munhu akapinda muchiratidziro, uye vanotarisira chiitiko chegore rinouya, sezvavanoramba vachiputsa nzvimbo nyowani muindasitiri yekushanya yepasi rese.